नेपाली लेखक सङ्घ कास्कीद्वारा ‘ताप’को परिचर्चा | eAdarsha.com
नेपाली लेखक सङ्घ कास्कीद्वारा ‘ताप’को परिचर्चा
पोखरा, ६ फागुन ।साहित्यकार शारदा शर्माको हालै प्रकाशित उपन्यास ‘ताप’ का विविध पक्षहरूमाथि आइतबार पोखरामा चर्चा गरियो।
नेपाली लेखक सङ्घ कास्कीको आयोजनामा भएको परिचर्चा कार्यक्रममा डा. नारायण चालिसेले तापको प्रभावपरक चर्चा गरेका थिए। उनले शर्माको सो उपन्यास बौद्धिक र उत्कृष्ट रहेको धारणा राखे।
उपन्यासको परिचर्चा गर्दै श्रीधर न्यौपानेले शर्माको लेखनले पाठकलाई अन्त्यसम्म तान्न सक्ने आकर्षण भएको बताए।
नेपाली लेखक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डा. तुलसी भट्टराईले शर्माले उपन्यासमा बौद्ध दर्शन, विपश्यना र माओवादी व्रि्रोहको परिदृश्यलाई सफलतापूर्वक चित्रण गरेको बताए।
कार्यक्रममा साहित्यकार विश्व शाक्यले पुस्तकमा प्रयोग भएको बुर्द्धदर्शन र डा. लक्ष्मीशरण अधिकारीले उपन्यासको शीर्षकको सार्थकतामाथि प्रकाश पारेका थिए।
परिचर्चा कार्यक्रमका समालोचक यादवराज उपाध्याय र साहित्यकार सूर्य खड्का विखर्चीले पाठकीय मन्तव्य राखेका थिए।
उपन्यासकार शर्माले फरक विषय र नयाँ विधामा आफूले कलम चलाएको र आगामी दिनमा लेखनलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनका कृतिमध्ये ताप उपन्यासमा पहिलो र अन्य कृतिमा आठौं हो।
संस्थाका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीशरण अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष भानु कँडेल र सञ्चालन सदस्य तुलसी प्रवासले गरेका थिए।